esikwenzayo - Chengdu Dien Photoelectric Technology Co., Ltd.
Ukwenziwa kwe-Optics '
Sizibophezele ekwenziweni kwe-serise yezinsimbi ezisebenza nge-crystal iminyaka engaphezu kwengu-12, ikakhulukazi ekufayeleni i-optics engekho emgqeni.
Sineqembu elikhulu lonjiniyela bokucubungula izingxenye ze-optical, abanokuhlangenwe nakho okucebile kokusika nokupholisha.
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokumboza ngazinye zezicelo ezahlukahlukene zamakhasimende ngamunye, asimisi isinyathelo sethu sokwenza ngcono ikhwalithi yokumboza futhi.
Izinto ngayinye zinakekelwa kahle ngaphambi kokuthunyelwa kumakhasimende.Ngale nhloso, imvamisa sihlola ikhwalithi ephezulu ngaphansi kwesikhulisi sezikhathi eziyi-100 nezidingo zokuhlolwa ngazinye ezifana nohlaka lwe-beam kanye ne-WFD nazo zamukelwa ngokuya ngama-oda.
Ukufanisa izinhlelo zokusebenza ezihlukile, njengamandla aphezulu, amakristalu mhlawumbe onakalisiwe phakathi kwalolu hlelo, siphinde sinikeze ngezinsizakalo zokuvuselela kabusha amakhasimende.
Uma ungaqiniseki ukuthi ungalwakha kanjani uhlelo lwakho noma ukuthi iyiphi impahla engasetshenziswa kulolu hlelo lokusebenza, ungakhathazeki, sinabo onjiniyela abangahlinzeka ngokubonisana kwamahhala kochwepheshe. Vele ukhululeke ukubuza.
I-DIEN TECH inikeza amakristalu we-laser ayi-1-2um, njenge, Nd: YAG 、 Nd ， Ce: YAG 、 Yb ： YAG 、 Nd ： YAP 、 Nd ： YVO4. 2 ~ 3um amakristalu e-laser, afana ne: Ho: YAG 、 Ho ： YAP 、 CTH: YAG 、 Er: YAG 、 Er ： YSGG 、 Cr ， Er ： YSGG 、 Fe ： ZnSe 、 Cr ： ZnSe. Amakristalu we-long wavelength NLO, afana ne-ZGP, AGS, AGSE, AGISE, CdSe. Futhi ezinye izinto ezisebenza nge-crystal namadivayisi.
Amandla ethu afaka ukwenziwa kwezinto, inqubo, ukumboza, ukulungisa futhi siyakwazi ukusiza amakhasimende ngesisombululo sonke sohlelo lwe-laser kanye nokubonisana ngobuchwepheshe. Uma unezidingo, siyajabula ukukusiza.